Hydraulic Cylinder Factory - China Hydraulic Cylinder ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
HSG01-E စီးရီးဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင် ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါအပေါက်ရှိဆလင်ဒါထည်ကိုအလုပ်ဖိအား၊ အလုပ်အပူချိန်၊ အလုပ်အခြေအနေနှင့်အခြားအထူးလိုအပ်ချက်များအရရွေးချယ်ရမည်။ ၁.၁ ဆလင်ဒါ Tube: အအေး ပေး၍ တိတိကျကျချောမွေ့သောသံမဏိပြွန်၊ အလိပ်လိမ်းထားသောသံမဏိပြွန်၊ အတုပြွန်။ 1.2 Tube ပစ္စည်း: SAE1020 (20 #), SAE1045 (45 #), 16Mn (Q345B), 27SiMn, etc ။ ၁.၃ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း: R0.16-0.32μm ၁.၄ အတွင်းပိုင်း Chromating: လိုအပ်ပါကအတွင်းပြွန်ကို chromated လုပ်ပါမည်။ 2.Piston လှံတံ 2.1 လှံတံပစ္စည်း: 35 #, SAE1045 (45 #) ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ခတ်သည်ခေတ်မီပစ္စည်းများချသည့်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအရန်ကူးထား သ၍ ၎င်းသည်ပစ္စည်းများအလိုအလျောက်နှင့်တိုက်ရိုက်ချနိုင်သည်။ ချသည့်စွမ်းရည်သည်မြင့်မားပြီးဖုန်မှုန့်နည်းသည်။ အဆိုပါ dumper ဖိအားလက်မောင်းမြင့်မားသောအနေအထားမြင့်တက်စေရန်ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာရုံမော်တာကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်, ပြီးတော့တစ် ဦး အပြည့်အဝတင်ဆောင် gondola ကားကိုလေးလံသောလှည်း shunting စက်အားဖြင့်ဆွဲထုတ်နှင့်က dumper ၏ရောင်ခြည်ကိုထောက်ပံ့ကားပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ နောက်ကျောပန်းကန် vibrator ပြည်ဖြစ်ပါတယ် ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် HSG အမျိုးအစားအင်ဂျင်နီယာဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါသည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှုနှင့်ဖြုတ်တပ်နိုင်မှု၊ လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ကြားခံကိရိယာနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်မှုပုံစံများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရုတ်သိမ်းသောစက်ယန္တရားများ၊ သတ္တုတွင်းစက်ယန္တရားများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ သုတေသနနှင့်ဒီဇိုင်း ၁။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်အင်ဂျင်နီယာ ၆ ဦး ရှိပြီးအနှစ် ၂၀၊ နှစ် ၄၀ သည် ...
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် 1. ၁။ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါကိုအဆင့်မြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ဆလင်ဒါခေါင်း၊ ဆလင်ဒါစည်၊ လက်၊ ပစ္စတင်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဆလင်ဒါစည်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၀ င်ထွက်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက် portsaနှင့် B ရှိပါသည်။ ရေနံသည် portaထဲသို့ ၀ င်ပြီး port B မှရေထွက်လာသောအခါ၊ ပိုမိုကြီးမားသောထိရောက်သောwithရိယာရှိသောပထမဆင့် piston ကိုတွန်းထုတ်သည်။ စီးဆင်းနှုန်းက ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ၁။ ၎င်းသည်အကြီးစားနှင့်အလတ်စားတူးဖော်သူများအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးဖိအား ၃၅၀ ကီလိုဂရမ် / စင်တီမီတာ ၂ ၂ နှင့်အပူချိန် - ၂၀ ℃ - ၁၀၀ for အတွက်သင့်တော်သည်။ (အအေးခန်း၏သတ်မှတ်ချက် - ၄၀ ℃ - ၉၀ ℃) ။ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ 2.a. သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့်မြင့်မားသောခွန်အား - ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာနှင့်ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်နှင့်ပစ္စတင်လှံတံကိုဂဟေဆော်ခြင်း၊
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် 1. နှစ်ဆလုပ်ဆောင်သောတစ်ခုတည်းသောရေပုံးအမျိုးအစားဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ Exavavator စီးရီးကိုတူးဖော်သောဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ရှိ linear motion actuator ကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပီစီစီးရီးဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါသည်အထူးသုတေသနပြု လုပ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံရှိကာဘားနည်းပညာမှထုတ်လုပ်သောတူးဖော်သောဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်မှုဖိအား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှုနှင့်ပြန်လည်ဖြိုခွဲမှု၊ ဒီတံဆိပ်အားလုံး ...